Amụma nzuzo - Popular Jewelry
You zụta ihe n’ụlọ ahịa anyị, dị ka akụkụ nke usoro ịzụ ahịa na ire, anyị na-anakọta ozi nkeonwe ị nyere anyị – dị ka aha gị, adresị gị na adresị email gị.
Kedu otu anyị si enweta nkwenye gị?
Ọ bụrụ na anyị arịọ maka ozi gbasara gị maka nke abụọ, dị ka ahia, anyị ga-ajụ gị ozugbo maka nkwenye gị gosipụtara ma nye gị ohere ịda.
Ọ bụrụ na mgbe ịbanyechara, ị gbanwere obi gị, ị nwere ike iwepu nkwenye gị ka anyị kpọtụrụ gị, maka nchịkọta na-aga n'ihu, ojiji ma ọ bụ igosipụta ozi gị, n'oge ọ bụla, site na ịkpọtụrụ anyị na info@popular.jewelry ma ọ bụ zitere anyị ozi. na:
255 Ọdụ Okporo Osimiri New York New York US 10013
N'ihi na ihe ezi uche, ị nwekwara ike na-agụ Shopify si Okwu nke Service (https://www.shopify.com/legal/terms) ma ọ bụ na Nkwupụta Nzuzo (https://www.shopify.com/legal/privacy).
Karịsịa, cheta na ihe ụfọdụ ndị na enye nwere ike dị na ma ọ bụ nwere ụlọ ọrụ na na-emi odude a dị iche iche ikike karịa ma ị ma ọ bụ anyị. Ya mere ọ bụrụ na ị na-ahọpụta n'ihu na a azụmahịa nke na-agụnye ọrụ nke a-atọ ndị ọzọ na-eweta ọrụ, mgbe ahụ, ozi gị nwere ike ịghọ n'okpuru iwu nke ikike (s) na nke na-eweta ọrụ ma ọ bụ ya ụlọ ọrụ na-emi odude.
Ọ bụrụ na ị na-enye anyị na gị kaadị ozi, ozi a na-ezoro ezo iji Secure Socket Layer technology (SSL) ma echekwara na a AES-256 izo ya ezo. Ọ bụ ezie na ọ dịghị usoro nnyefe n'elu Ịntanetị ma ọ bụ electronic nchekwa bụ 100% ala, anyị na-eso ihe niile PCI-DSS chọrọ ma mejuputa ọzọ n'ozuzu nabatara ụlọ ọrụ ụkpụrụ.
Nkebi 7 - Kuki
Nke a bụ ndepụta nke kuki na anyị na-eji. Anyị na-na e depụtara ha ebe a otú ị na ị nwere ike họrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ nwepu aha nke kuki ma ọ bụ.
Nkebi 8 - Age nke nkwenye
Nkebi 9 - mgbanwe a na Nzuzo
Ọ bụrụ na ịchọrọ: ịnweta, dozie, mezie ma ọ bụ hichapụ ozi onwe anyị ọ bụla gbasara gị, debanye aha mkpesa, ma ọ bụ chọọ ịchọrọ ịmatakwu kpọtụrụ Onye Nkwupụta Nzuzo anyị na info@popular.jewelry ma ọ bụ site na mail na